आज नेपाललगायत अरू कुन कुन देशमा मनाइदैछ नयाँ वर्ष ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज नेपाललगायत अरू कुन कुन देशमा मनाइदैछ नयाँ वर्ष ?
नेपालको साँस्कृतिक र राजकीय नयाँ वर्ष आज अर्थात् वैशाख १ गते धुमधामका साथ मनाइंदैछ।
देशका विभिन्न भागमा यसलाई फरक फरक सांस्कृतिक महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । सुदूरपश्चिम नेपालमा आजको दिनलाई बिसु पर्वको रुपमा मनाइने गरिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा विभिन्न समुदायहरूले फरक फरक तरिकाले फरक फरक दिनमा नयाँ वर्ष मनाउने गर्दछन्।
वैशाख १ का अतिरिक्त नेपालमा राई, लिम्बू र तामाङहरूले मनाउने भिन्नाभिन्नै ल्होसार, नेवारहरूको नेपाल संवत, थारुहरूको माघी या मुस्लिम नयाँवर्ष पनि नयाँ वर्षका उदाहरणहरू हुन्।
यस दिन सूर्य मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले ज्योतिषीय दृष्टिले समेत यस दिनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिनलाई मेष सङ्क्रान्ति समेत भनिन्छ।
याे पनि पढ्नुस याे वर्ष : घरकाे पात्रो फेरियाे, मुहार फेरिएन...
याे पनि पढ्नुस नयाँ वर्षमा खचाखच हुने पर्यटकीयस्थल सुनसान
याे पनि पढ्नुस नयाँ वर्षले कोरोना विरुद्धको संघर्षमा एकताको आधार दिनेछः अध्यक्ष प्रचण्ड
ट्याग्स: New Year, नयाँ वर्ष